Burada dhuxusha oo la shiido
Dhuxusha waa nooc ka mid ah macdanta kaarboonaysan.Waxaa habeeya kaarboon, hydrogen, ogsijiin, nitrogen iyo walxo kale, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo shidaal ahaan aadanaha.Waqtigan xaadirka ah, dhuxushu waxay leedahay 63 jeer mugga kaydka la sahamiyey marka loo eego batroolka.Dhuxusha waxaa loo yaqaan dahabka madow iyo cuntada warshadaha, waa tamarta ugu weyn tan iyo qarnigii 18aad.Intii lagu jiray Kacaankii Warshadaha, oo ay weheliso hindisaha iyo adeegsiga mishiinnada uumiga, dhuxusha waxaa si weyn loogu isticmaalaa shidaalka warshadaha waxayna u keentay xoogag wax soo saar weyn oo aan horay loo arag bulshada.
Dhuxusha Shiinaha waxa ay u qaybsantaa toban qaybood.Guud ahaan, dhuxusha caatada ah, dhuxusha coking, dhuxusha dufanka leh, dhuxusha gaaska, dhuxusha daciifka ah ee isku xidhan, aan xidhnayn iyo dhuxusha ololka dheer ayaa si wada jir ah loogu tilmaamaa dhuxusha bituminous;Dhuxusha caatada ah waxaa loo yaqaan semi Anthracite;Haddii waxa ku jira isbeddelku uu ka weyn yahay 40%, waxa loo yaqaan lignite.
Miiska kala soocida dhuxusha (inta badan dhuxusha la karsado)
Dhuxul caato ah
Dhuxusha lagu karsado Dhuxul dufan
Dhuxusha curaarta daciifka ah
Dhuxul aan dammaanad lahayn
Dhuxul olol dheer
0 (blocks) 8 ~ 20
0 ( xannibaadyo) ~ 9
Badanaa baaxad weyn, madow madow, dhalaal madow, muuqaal dabacsan;Waxay ka kooban tahay ilaa 40% walxo is-bedbeddelaya, bar shid yar oo si fudud dab loo qabsado.Waxaa guud ahaan loo isticmaalaa gaaska, warshadaha liquefaction, kululeeyaha korontada, iwm.
Guud ahaan waa granular, yar iyo budada, inta badan madow iyo dhaldhalaalaan, oo leh muuqaal wanaagsan, oo ka kooban wax ka badan 30% walxo aan degganayn, dhibicda dabka yar oo sahlan in la shido;Inta badan dhuxusha bituminous waa kuwo dhegdheg leh oo ay fududahay in la dilo inta lagu jiro gubashada.Waxa loo isticmaalaa coking, isku dhafka dhuxusha, kuleyliyaha tamarta iyo warshadaha gaaska.
Waxaa jira laba nooc oo budo ah iyo qaybo yaryar, kuwaas oo ah madow, macdan iyo dhalaalaya.Wasakhda yar, qaabka is haysta, kaarboonka kaarboonka ee sarreeya, ilaa in ka badan 80%;Waxa ku jira isbedbeddelku waa hooseeyaa, oo ka hooseeya 10%, barta shidashadu waa sarraysaa, mana fududa in dab la qabsado.Xaddi ku habboon oo dhuxul iyo carro ah waa in lagu daraa gubashada si loo yareeyo xoogga dabka.Waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo gaas ama si toos ah shidaal ahaan.
Geedi socodka socodka dhuxusha
Shiididda dhuxusha, waxay inta badan ku salaysan tahay isku-dheellitirnaanteeda Harzburg.Way sii weyn tahay isku-dhafka shiidaalka Harzburg, way ka sii fiicnaan doontaa shiididda (≥ 65), iyo inta yar ee isku-dheellitirnaanta Harzburg, way sii adkaanaysaa shiididda (55-60).
① dooro mashiinka ugu muhiimsan si waafaqsan shuruudaha wax soo saarka iyo ganaaxyada;
② Codsiga ugu muhiimsan: dhuxul kulaylka ah
1. Qalab-shiid kiimikaad (HC, HCQ taxane ah oo la miiray dhuxusha):
Qiimaha maalgashiga hooseeya, wax soo saarka sare, isticmaalka tamarta yar, qalabka xasilloon iyo qaylada hoose;Cilad-xumada jirta ayaa ah in kharashka hawlgalka iyo dayactirku uu ka badan yahay kan shiididda toosan.
Miiska awoodda ee HC taxanaha shiididda (200 mesh D90)
Matoorka warshadda ugu weyn (kw)
Matoorka wax qarxiya (kw)
Matoorka kala soocida (kw)
Odhaahyo (qaabaynta ugu weyn):
① Nidaamka wareegga furan ee patented Hongcheng waxaa loo ansixiyay lignite iyo dhuxusha ololka dheer oo leh isbedel sare.
② Jirka ubaxa plum ee leh qaab dhismeedka pendulum-ka toosan wuxuu qaataa qaab-dhismeedka gacan-gacmeedka, kaas oo leh saameyn wanaagsan.
③ Aalada ka hortagta qaraxa waxaa loogu talagalay nidaamka.
④ Boodhka ururiyaha iyo dhuumaha waa in loo qaabeeyaa si looga fogaado in meel dhinta ay ku ururto boodhka ilaa inta suurtogalka ah.
⑤ Nidaamka gudbinta budada, waxa lagu talinayaa in macaamiishu qaataan gaasta gudbinta oo ay shuruud ku daraan gudbinta nitrogen iyo nidaamka ogsaydhka nitric oxide.
2. Dhuxul-dhagax toosan (HLM mill dhuxul toosan):
Wax-soo-saarka sare, wax-soo-saarka baaxadda weyn, heerka dayactirka hooseeya, heerka sare ee otomaatiga iyo farsamada hawada kulul ee qaan-gaadhka ah.Khasaaradu waa kharash maalgashi oo sarreeya iyo dhul ballaadhan.
Tilmaamaha iyo cabbirrada farsamada ee HLM firidhka dhuxusha toosan (warshadaha biraha)
Awoodda matoorka ugu muhiimsan (kw)
The weynDhuxushaWalxaha waxaa burburiya burburiyaha si ay u nuugaan ganaaxa (15mm-50mm) kaas oo geli kara mashiinka wax lagu shiidi karo.
Ka la shiidayDhuxushaQalabka yar yar waxa loo soo diraa hopper bakhaarka wiishku, ka bacdina waxa loo diraa qolka wax lagu shiidi karo ee shiidka si siman iyo qiyaas ahaan feederiyaha si loo shiido.
Tusaalooyinka codsiga ee farsamaynta budada dhuxusha
Qaabka iyo tirada qalabkan: 3 qaybood oo ah HC1700 nidaamka wareegga furan ee shiididda
Habaynta alaabta ceeriin: Anthracite
Wanaagga alaabta la dhammeeyey: 200 mesh D92
Awoodda Qalabka: 8-12 tan / saac
Mashruucu waa in lagu bixiyo dhuxusha la shiiday kuleyliyaha lagu shido dhuxusha ee nidaamka kuleylinta dhulka hoostiisa ee Bulianta miinada dhuxusha ee koox.Qandaraaslaha guud ee mashruuca waa Akademiyada Cilmiga Dhuxusha ee Shiinaha.Tan iyo 2009, Akademiyada Shiinaha ee Sayniska Dhuxusha waxay ahayd lammaane istiraatijiyadeed ee Hongcheng iyo isbahaysi xooggan.Dhammaan kuleyliyaha kuleyliyaha dhuxusha iyo mashaariicda dhuxusha la miiray waxay qaataan warshad wax shiida ee Hongcheng si loogu habeeyo nidaamka.6-dii sano ee la soo dhaafay, Hongcheng waxay si daacad ah ula shaqaynaysay Akadeemiyada Cilmiga Dhuxusha, iyo mashaariicda dhuxusha ee dhuxusha la jeexjeexay ayaa ku faafay dhammaan meelaha ugu muhiimsan ee laga soo saaro dhuxusha ee Shiinaha.Mashruucu wuxuu qaadanayaa saddex qaybood oo ah warshadaynta Raymond oo leh HC1700 nidaamka wareegga furan, kuwaas oo si gaar ah loogu talagalay shiididda dhuxusha la tumay.Hc1700 shiididda dhuxusha dhuxusha waxay qabataa wareegga furan, rakibidda qalabka aan qarxin iyo tallaabooyin kale, nidaamkuna waa badbaado oo la isku halleyn karo.Wax-soo-saarka HC1700 Mill ayaa 30-40% ka sarreeya ta warshad-shiidida dhaqameed ee pendulum-ka, kaas oo ah badbaadinta tamarta iyo deegaanka-saaxiibtinimo.
Ultra Fine Mill Warshadda Rinjiga Rinjiga Burada Ka Soo Qaada Shiineeska Batroolka Coke Roller Mill Furimaha Dagaalka Dhaqdhaqaaqa Fiican ee Ultra Qiimaha Mashiinnada Milling